संस्मरण | साहित्य संसार
छालमा रुझेकी उ
वनगाउँ प्लेटफर्म । पश्चिम बंगाल । ‘कफी, चाय…’ भन्दै एउटा आइपुग्यो । ‘कफी खाऊँ है ?’ पम्पाले प्रस्ताव राखी । आफूलाई कस्तो तलतल लागिसक्यो । ‘आगे टेस्ट करो ना, किरकोम आछे ?’ सिराजले भन्यो । ‘स्ट्रङ आचे, इट क्यान बि कन्सिडरड्,’ पम्पाले सुरुप्प एक चुस्की तानेर भनी । सबैले कफी पियौं । ‘ओए […]
अजरबैजान हावापानीका दृष्टिले अलि अनौठै छ— हिउँदमा माइनस ३०० सेल्सियमा झरेको तापक्रम गर्मीमा ५०० सम्म पुग्छ। त्यसैले होला, हिउँदको जीवनशैली र गर्मीका दिनहरुमा आकाश–जमिनको भिन्नता हुन्छ— कुनै तादात्म्य हुँदैन जाडो र गर्मीबीच उठाइबसाइ, लवाइखवाइको। ग्रीष्म ऋतुमा मानिसहरु ज्ााडोमा भिरेका लुगाका भारी फ्याँकेर पातला पारदर्शी लुगामा […]
– अजरबैजानमा दुई वर्ष बसेर स्वदेश फर्कियौं हामी तर अजरबैजान र अजरी मित्रहरुको सम्झना भने अझै गाढा हुँदै आइरहेछ । हामीले घुमेका अजरबैजानका ठाउँहरु, घुलमिल भएका मित्रहरु र रमाएका संस्कृतिहरुको सम्झना भइरहेछ बारम्बार । कहाँ घुमेनौं हामी ! मध्यअजरबैजानदेखि जर्जियाको सीमासम्मका सात रायोन (जिल्ला) स्यामकिर, […]
प्रकाश सायमी संग ७ दिन
“म लेख्छु । पढ्नको लागि लेख्छु । लेख्नको लागि पढ्छु । पढ्ने र लेख्ने काम आफ्नो मस्तिष्कलाई सोधन गर्नको लागि गरिरहन्छु ।” यो भनाइ प्रकाश सायमीको एक अन्तरवार्ताबाट साभार गरेको हुँ । यो भनाइलाई चिन्तन र मनन गर्ने हो भने सबै पाठकहरु लेख्न र पढ्न […]
“बर्सादी दिनहरु” दोश्रो संस्करणको बिमोचन पोखरामा निकै भब्य पुर्बक सम्पन्न भएको थियो । बिद्युतिय निमन्त्रणामार्फत मैले सुईको पाउनासाथ प्रकाश दाईको दर्शन गर्न म निकै आतुर थिए । समय आयो र गयो पनि । हुन त प्रकाश सायमी दाईसँग त्योभन्दा अगाडि दुई पटक भेट भईसकेको थियो […]
सन् २००८ समरको बिदाको दिन त्यो समय । कसरी टोकियोमा एक्लै बिताउने ? लागे तोहोकुतिर । जुनियर भाइहरू थुप्रै थिए तोहोकु बिश्वविद्यालयमा । त्यसो त बिधार्थी हुँदा समरमा नेपाल फर्किन्थ्यो । अनि त साथी-भाइ भेटेर, आफ्नो गाउँको खोलामा खेलेर दिन गर्मी बिदा बिताइन्थ्यो । तर […]
मेरो कार्यकालमा कसरी खस्क्यो मधुपर्क’ ?
एउटा मीठो सपनाजसो गरी म गोरखापत्र संस्थानसँग प्रत्यक्ष नाता गाँस्न पुगेकी थिएँ । मैले होस सम्हालेको बेलादेखि म सचेत हुञ्जेलसम्म पनि नेपालमा अखवार भनेको गोरखापत्र र गोरखापत्र भनेकै अखवार हो भन्ने मलाई लागेको थियो । त्यसैले आफूले अत्यन्त सम्मान गरेको त्यस अखवार छाप्ने संस्थाको प्रमुख […]
कोरङ्गी प्रेम संखुवासभा एकताका मेरो रुचिको विषय भनेको संगीत थियो । त्यो विनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सक्तिन थें । त्यसैले म सानो छँदा अगेनो माथिको खोपीमा रहेको बुढो रेडियोले एकै छिन सःुख पाउँथेन । गाईबाख्रा चराउँदा होस या भाइ वहिनी हेर्दा अथवा बाबु बाजेको […]
संस्मरण युवराज नयाँघरे उडुसका खानिमा परिएछ !हो उडुसैउडुसको गुँडमा पुगेछु म त । जहाँसुकै र जतासुकै उडुसको सिलिङबिलिङ । सोफा ओछ्यान कुसर्ी टेबुल चकटी सर्वत्र उडुसको डरलाग्दो आतङ्क । दिनरात उडुसको चर्चा । रातोदिन उडुसको बयान । उडुस आतङ्कले म भएँ महा दिक्क !वाल्कर बस्न […]